အမှတ်တရ ခေါင်းတလားများ.. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Photography » အမှတ်တရ ခေါင်းတလားများ..
Posted by amatmin on Feb 13, 2012 in Photography, Society & Lifestyle | 18 comments
နာရေးကူညီမှုအသင်းမှာ လှူရင်းနဲ့ ရိုက်ဖြစ်ခဲ့ကြတဲ့တချို့ပုံလေးတွေကိုတော့ ကြည့်ပြီးကြပြီထင်ပါတယ်။ နာရေးကူညီမှုအသင်းမှာ နောက်ထပ်ထူးခြားတဲ့ ဘာပုံတွေများရှိမလဲလို့ သိချင်ကြမဲ့ သူတွေအတွက် နာရေးကူညီမှုအသင်းနဲ့ဆက်စပ်နေတဲ့ ပုံလေးတွေကို ပြန်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်..
အဲယားကွန်းပါတဲ့ခေါင်းတလားပါ.. သံဃာတော်တွေအတွက်အသုံးပြုရန်ဆိုပြီးလာရောက်လှူဒါန်းခဲ့ပေမဲ့ ပိုင်ရှင်ကအမျိုးသမီးဖြစ်ခဲ့တော့သုံးဖို့ခက်ခဲသွားတာပေါ့.ဘာကြောင့်ရယ်မသိ.စည်ပင်ကလည်းသုံးခွင့်မပေးထားပါဘူးတဲ့..
ဒီခေါင်းတလားကတော့ အကျိုးပြုဆယ်လီဘရစ်တီ များအတွက်ပါတဲ့..
ပြောရရင်တော့ ကြည်နူးစရာအလှူကို စိတ်ရောက်နေတာနဲ့ နာရေးကူညီမှုအသင်းရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်အကြောင်းဝန်ထမ်းတွေ ရှင်းပြနေတာကိုသေချာတောင်နားမထောင်မိခဲ့ဘူး။
စိတ်ထဲမှတ်မှတ်ထင်ထင် သတိထားမိတာလေးတွေကတော့ လာရောက်လှူဒါန်းတဲ့သူတွေက ၅မိနစ်ခြားတဦးလောက်ကိုတွေ့နေရသလို၊ ၀န်ထမ်းတွေအားလုံးကသန့်ရှင်းကြည်လင်နေကြပြီး ရှင်းပြပေးတာကလည်းတကယ့်ကိုစိတ်လက်ပါရှိကြလို့ နောက်တခါလာလှူဖြစ်ချင်အောင်ကိုဖော်ရွေကြတယ်။ နောက်ဆုံးအပေါ်က အခေါင်းတလားတွေ(tool box)အကြောင်းရှင်းပြပေးတာရော.အခေါင်းတွေကသန့်ရှင်းနေတာရောပေါင်းပြီး အခေါင်းကိုတောင်အခေါင်းလို့မမြင်နိုင်တော့တဲ့အထိပဲ..
ပကာသန မဖက်တဲ့ သန့်ရှင်းသောအလှူ..
လူပီသသောလူတယောက်ကို အနီးကပ်အတုယူအားကျရတဲ့ ကြည်နူးစရာအလှူ..
မမြင်ဖူးကြပေမဲ့ စည်းလုံးပျော်ရွှင်ခဲ့ရတဲ့ ပထမဆုံးအလှူ..မို့
ခေါင်းတွေအကြောင်း ကိုယ် ဘာမှ မသိလိုက်ရဘူးဗျာ။
အခုလို ဓါတ်ပုံလေးတွေနဲ့ ရေးပြတော့မှ
စိတ်ဝင်စားစရာလေးတွေ ရှိသေးတာ သိရတယ်ဗျာ။
အမတ်မင်းရေ မောင်မောင်တိုက်နဲ့ ကိုကိုဖက်ကပ်တို့အတွက် တစ်လုံးစီမှားထားပေးပါ ….. အဲကွန်း… ကေတီဗွီ….. စုံစုံလင်လင်ပါတာလေးပေါ့နော်………….မှာထားပေးလိုက်ပါဗျာ…… သူရဇော် 21451
အမတ်မင်းရေကျေးဇူးပါ။ တကယ် rose မသိလိုက်လို့။ တကယ်မသိလိုက် ရတာကို သိသွားပါတယ်။ အပေါ်ဆုံးက ပုံကိုသိတယ်ကားဂိုထောင်ထဲမှာမို့လို့ နောက်ပိုင်းပုံတွေကို မသိလိုက်ဘူး။
လိပ်စာလေးသာပြော အခမဲ ပေးမယ်တဲ့
ရှင်းပြနေတုန်း မရှိလိုက်လို့ ..ခုမှသိရတယ်ဗျား..
တကယ် ကို တရား ရစရာ ပါပဲ ဗျာ
အမတ်မင်းက တကယ် လေ့လာရေးဆင်းလိုက်တာပဲ။
မျက်မမြင်ဆင်စမ်းသလို (ရမ်းပြောတာကို ဆိုလိုတာ မဟုတ်ပါ) နာရေးကူညီမှုအသင်း အလှူမှာ တစ်ယောက်တစ်မျိုး ရှု့ထောင့်တွေနဲ့ ပြောပြကြလို့ မလိုက်ရတဲ့လူတွေတောင် တကယ်ရောက်သွားရသလို အသိအမြင်တွေ စုံသွားရတယ်။
အော်- ဒီလို သူမတူတဲ့ အသိအမြင်တွေကြောင့်လည်း အမတ်မင်း (ရိုးရိုးအမတ်မဟုတ်ဘူးနော်…… အမတ်မင်း) ဖြစ်တာပေ့ါ။
လွှတ်တော်မတက်ပဲ လျှောက်သွားနေလို့ ………..
@ ကိုဘလက်၊ မိပေါက်ဖော်၊ အန်တီပဒုမ္မာ၊ မRose၊ Mလုလင်၊ ကိုသူရဇော်
အကုန်လုံး ကိုကျေးဇူးပါဗျာ.. အပေါ်ကရေးထားတဲ့ အလှူအပေါ်ခံစားမိတာက
ဒီလူတွေကို တွေ့ဖူးပြီးသွားမှ ဖြစ်လာရတာပါ…
အခေါင်းတွေထဲ မရောက်ခင် မန်းလေး သို့ ရန်ကုန် တနေရာမှာတော့ ဆုံကြဦးမယ်လေ..
@အန်တီမမရေ..တကယ်သာ လိုက်လာဖြစ်ခဲ့ရင် ဒိထက်ပိုစုံသွားမှာဗျ..
လွှတ်တော်မှာက တနေ့မှ ၁၆၀၀၀ ပဲရလို့မကိုက်တာနဲ့ ရွာလည်ပစ်လိုက်တာလေ..
မရွေးတော့ပါဘူး ဘယ်နေရာမှာ ဘယ်လိုပုံနဲ့သေမယ်မှန်းမှမသိပဲ
အခေါင်းတွေ က သပ်ယပ်တယ်နော်။ တကယ်လူသေရင် နာရေးကူညီမှု အသင်းမအပ်ပဲ ကိုယ်တိုင် အခေါင်းမှာရင် သစ်ကလည်း ပိုးကိုက်ပါသေးတယ်။ ဦးလေး တယောက်က အရပ်ရှည်တော့ အခေါင်းထဲမှာ မဆန့်ချင်လို့ ခေါင်းလေးတောင် စောင်းနေတယ်။ ၆ပေ လုပ်ပေးရင် လွတ်ရက်သားနဲ့ ဆိုဒ်ခိုးတာ.. ဈေးကလည်း ရှယ်ကြီးတယ်။ အဲဒါမျိုး ဘယ်သူမှ ကိုယ်တိုင် မလုပ်တော့.. သူတို့ ပါးစပ်ထဲတင် ဈေးဖြစ်နေတော့တာပေါ့။
အပေါ်ကမန့်သွားတဲ့ …ကိုရင်မိုးဇီးလေး ဆိုရင် ပျဉ်စပ်ရတာ သိပ်ကုန်မှာ မဟုတ်ပါဝူးကွယ်….
ပျဉ်သိပ်မစပ်ရတော့ သစ်ပင်သိပ်မခုတ်ရဘူးပေါ့ ခိခိ ….
သည်တော့ ဂရင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော ….
(မှတ်ပလားတွ ကိုရင်မိုးဇီး….. နာ့ဝို သမသွားလို့ လက်စားလာချေတာ….)
ကြားတာတော့ ညီလေးဇိက ၄ပေ၈လက်မ ဆိုလား စီးတဲ့ဒေါက်ကတော့ ၈ လက်မတဲ့
လက်နက်ချတာ မဟုတ်ဘူး.. အိပ်မောကျနေတာ.. ဟောက်တောင် ဟောက်နေတယ်။
ရှေ့ မှာ သေခြင်းရဲ့ တံခါးများ
ဘေးမှာ ငပေကမြင်း ခိုး ရောင်းစား
ကိုအမတ်မင်းရေ ..ကျွန်မလည်း အဲ့ဒီ ခေါင်း တလားကြီး တွေ လိုက်ရှာကြည့်တာ မတွေ့ ခဲ့ရဘူး … တင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် … ပလပ်ပေါက်ထိုးရတဲ့ အပေါ်ဆုံးက ခေါင်းကြီးကိုတော့ ချာတူးလေး ဗွီဒီယိုရိုက်လာလို့ မြင်ခဲ့ရတယ် …. ။
ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ .. သေတယ်ဆိုတာကြားလျှင် …ခေါင်းနား အလောင်းနား ကပ်ဖို့မပြောနဲ့ … အဝေးကနေတောင် မကြည့်ရဲဘူး … နောက်ပိုင်း ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ရောက်မှ အသုဘတွေ လိုက်ပို့ရင်း … သေတယ်ဆိုတာ ဒါပါလား လို့ နားလည်ခဲ့ပြီး ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ် မထင်တော့ဘူး .. ။
တစ်ချို့ လူတွေရှိသေးတယ် … အသုဘက ယပ်တောင်ကမ်းလျှင် မယူပဲ လမ်းလွှင့်ပစ်တာကို … အသုဘပို့ပြန်လာလျှင် အိမ်ထဲဝင်ထဲအခါ ခြေလက် အရင်ဆေးတာတို့ .. တရော်ကင်ပွန်းနဲ့ ခေါင်းလျှော်တာတို့ .. စုံနေတာပါပဲ … ။ တစ်နေ့သေကြရမှာပဲလေ …. ဒီနေ့ရှင်နေပေမယ့် မနက်ဖြန်သေချင်သေနိုင်တာပဲမို့ … လူသေလည်း ကြောက်စရာမကောင်းတော့ဘူး … ။